IKHETHEKILEYO: ILISO LEQUEER LIKAJONATHAN VAN NESS LIZISE UBUNGCALI BOKULUNGISA KUMTSHATO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UQueer Eye kaJonathan Van Ness Wazisa ubuNgcali bokuzilungisa ukuze ancede iiChic ezimbini zokuLungisa ngoMtshato wabo
UQueer Eye kaJonathan Van Ness Wazisa ubuNgcali bokuzilungisa ukuze ancede iiChic ezimbini zokuLungisa ngoMtshato wabo
UDavid Perlman Ukufota
Ngu: Joyce Chen 07/03/2018 ngo-4: 30 PM
Ukuba nendima encinci kuAugustus Prew noJeffrey Self's stylized, mihla kunye nokungaqhelekanga komtshato wosuku ngokungathandabuzekiyo yayiyimfumba yolonwabo kwaye Iliso leQueer Ingcali kwezokuzilolonga uJonathan Van Ness, owalinganisa ii-tress zala madoda mabini kulo msitho, ibingumsebenzi wobugcisa.
Ubuntu beNetflix bongeze isandla kubo bobabini uPrew kunye nesiqu sabo njengoko babenobukhazikhazi kusuku lwabo lomtshato, olwaludelela iindibano phantse ngazo zonke iindlela. Kwaye ngokungathandabuzekiyo, uPrew uxelele i-Knot, inxalenye yolonwabo yayiyinkcubeko yesiko kunye nokwenza ubuqhetseba ngokuzonwabisa, ababethetha bodwa kwaye, ngethemba, ezinye izibini ze-LGBTQ.
ezifikelelekayo zonke iiphakheji zekhefu lomtshato
Sasingaqinisekanga ngento esifuna ukuyenzela iisuti zethu, kodwa sasisazi ukuba sifuna ukuba bathethe ngokucacileyo kwaye bangahambelani, utsho. Besingafuni ukuba izive ngathi iyinto esesikweni. Sasifuna imeko yomsitho kunye nesiko, kwaye sasifuna ukuba nayo yonke intsingiselo kodwa ngaphandle kwayo nayiphi na into engenantsingiselo. Kwaye kuba umtshato wamafanasini uneminyaka emibini enesiqingatha ubudala, ndiziva ngathi ezi zithethe azimiswanga nangayiphi na indlela. Yinto entsha le.
Amagumbi amabini akhethe i-tuxes zikaTurk ezincomanayo, zibonisa izimbo zabo kunye nezinto abazithandayo ngelixa bebonisa ubumbano olunengcinga. U-Prew wayenxibe i-tuxedo emhlophe yebhatyi yesidlo sangokuhlwa enombala wegolide obhangqwe ngetayi ebhulowu ye-velvet, ngelixa u-Self wakhetha i-tux eprintiweyo, e-blue eqaqambileyo kunye ne-tie emnyama emnyama.
Ingcinga yokuba sihamba ngendlela enye kodwa sikhetha ukuhamba kunye ngokuchaseneyo nokunyanzelwa, utshilo uPrew. Yimbono yokuba iqabane lakho likuvumela ukuba ube ngoyena ulunge ngakumbi kuwe kunokuba yimeko yokuxhomekeka kwindawo oqala kuyo ukufumana indlela yomnye nomnye.
U-Prew wayenxibe iikawusi ezi-orenji, ipiki engathandabuzekiyo enikwe ukuba amaxolo eorenji abambe ukubaluleka kulwalamano lwababini. Ngomhla wabo wokuqala, bahamba benyuka kwindawo ekude, kwaye u-Self wakhankanya ukuba uya kuhlala efumana iipelisi zeorenji phantsi nanini na xa kufuneka enze isigqibo sobomi. Xa esi sibini sifika encotsheni yentaba, kwakukho amaxolo eorenji athe saa kumgangatho womhlaba.
Kwakukho kuyo yonke indawo. Kwaye kwakungekho mntu phezulu phaya ngaphandle kwethu, ke yayiyeyona nto yomlingo, yomzuzu apho sobabini sasenza ngathi khange yenzeke nje, utshilo uPrew. Ukusukela ngoko, bekusoloko kukho i-orenji yexolo ngexesha elinomdla, elibalulekileyo, kwaye yile ntlekele nje engaqhelekanga. Okanye hayi? Ngubani owaziyo?
Ezinye izinto ezingaqhelekanga zomtshato zibandakanya ikhekhe lomtshato lesiko elinemibala emithathu ebonisa imibala yabo: indalo, uluntu lwe-LGBTQ, kunye nentlango, kunye nezifungo ezenzelwe wena eziye zaphela.
Inxalenye yomxholo wethu ibiyindalo, ke ngoko bekukho izityalo eziluhlaza [kwikhekhe], kwaye ke kukho umaleko ophezulu onemilingo, imibala ejikelezayo, emele ubuqili behlabathi kunye noluntu lwe-LGBT kunye nemvakalelo yolonwabo, Prew utsho. Kwaye emazantsi, sayenza ngakumbi inkqantosi-y, eyayimele i-LA, eyindawo esadibana kuyo, kunye nentlango. Sithanda intlango kakhulu.
Mhlawumbi eyona nto ibaluleke kakhulu kumtshato wesibini, nangona kunjalo, yayizifungo zabo, ezazibhalwe ngokwabo kwaye zaphela nokupela, kwazo zonke izinto.
Upelo lwalubalulekile kuba, kwakhona, sasifuna wonke umntu ukuba abelane ngamava, kwaye sithanda isithethe somtshato, utshilo uPrew. Inqaku lomtshato, ndiyacinga, ewe kukwabelana ngobomi bakho, kodwa kukwakho into eyimisakramente ngeendlela ezininzi. Udibanisa uhlobo oluthile lwesiko, ukudibanisa kunye, kwaye thina, ukubuyela kumandla endalo iphela, nazo zonke izinto ezilungileyo.
Senze wonke umntu ukuba abhale umnqweno kwiphepha lesikhumba njengoko beza, emva koko safumana wonke umntu ukuba alibeke ezandleni zakhe, alithumele emoyeni, emva koko sonke sikhanyise ikhandlela kunye nomnxeba kunye, nakuloo mnxeba yayizizinto ezininzi ezahlukileyo, enye yayikopel, enye intlaka yokuqhumisa, ipele yeorenji. Sathetha into entle kunye, umtshato wonke, bonke abangama-200 kunye nabantu, kwaye emva koko sayikhupha emoyeni. Leyo yayiyintloko yethu yokuhlanganisa imiphefumlo kunye, ngokuchaseneyo nokuphindaphinda nje emva kwam, '' yithi, '' ndiyakwenza, `` awunjalo. '' Sifuna ukubonisa ukuba yayingumzuzu wethu okhethekileyo , umzuzu wethu omncinci wobugqi.
Khusela umbono wakho ofanelekileyo womtshato ngokuqala nge-Knot's Style Quiz, apha.
Umtshato wesibini isipho semveli
I-avareji yeendleko zemitshato
indoda nabafazi bathembisa amakhonkco
Ikhitshi elimhlophe le-dallas
michigan indoda umqolomba